Ashtako samey | DO
Foomkeenna ashtako ku samey
Ashtako waxaa lagu sameyn karaa foomkeenna ashtakooyinka oo aad soo daabacanayesid, buuxineysid, dabadeedna noogu soo direysid boosto ahaan ama e-mail. Foomku wuxuu jiraa oo keliya isagoo swiidhish ah.
Xagga foomka ashtakada (Till anmälningsblanketten)
Ashtako samey adiga oo isticmaalaya farriin waraaq ah
Waxaad xitaa qori kartaa ashtako farriin waraaqo ah oo aad boosto ama e-mail ku soo direysid. Warqaddu waa in ay ka koobnaataa magacaaga, cinwaankaaga, nambarkaaga taleefanka, iyo fadlan e-mailkaaga iyo macluumaad u dhigma oo ku aaddan cidda aad ashtakeyneysid. Sida ugu cad ee suurta ah tilmaam uga bixi waxa ay ashtakadaadu ku saabsantahay. Waxaad wax walba ka hor u baahantahay in ay ku jiraan wixi dhacay, goorta ay dhaceen, cidda wax takoortay iyo aasaaska ama aasaasyada takooridda ee aad u maleyneysid in ay arrintu khuseyso.
Luqadaha oo dhan ku ashtakoo
Luqadaha oo dhan ashtako waa noogula soo gudbin karaa. Markaa ashtakada waxaannu u turjumeynaa af-swiidhish. Inta badan waxaannu ku jawaabi doonnaa af-swiidhish.
Ashtako afka ah
Haddii ay sabab jirta darteed kugu adagtahay in aad farriin qoraal ah qortid ama aad buuxisid foomamka ashtakada, waxaad ashtako ku sameyn kartaa si afka ah ama si kale.
Si aad macluumaad dheeraad ah u heshid nala soo xiriir. (Kontakta oss för mer information.)
Ashtako waa dukumiinti cid walba u furan
Marka ay ashtako na soo gaarto waa la diiwaan gelinayaa waxaana la siinayaa nambar lagu aqoonsado. Maadaama DO ay tahay hey'ad dowladeed waxay ashtakadu noqoneysaa mid cid walba u furan. Waxay taasi ka dhigantahay in cid kasta ay xaq u leedahay in ay wax ka hesho. Laakiinse dabcan waxaannu mar walba inta aanan dukumiintiga dhiibin sameyneynaa waxa loogu yeero qiimeyn xagga sir qariska ah. Waxay taasi ka dhignaan kartaa in aannu meesha ka saareyno macluumaadka xasaasiga ah ee dukumiintiga ku jira.
Qofki takoorid ka ashtakooda waxaa jira sharci ka ilaalinaya in la ciqaabo, macnaha in laga aarsado. Waxay aarsashadu tusaale ahaan ku saabsanaan kartaa in shaqa bixiye uu qofka ashtakooday dusha ka saaro shaqo ka culeys badan kuwa kale. Ciddi ka aarsasho loo geysto taas wey noo soo sheegi kartaa.